होसीयार ! सेतो पुतली बढेसँगै यस्ताे ख-तरनाक राेग
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। होसीयार ! सेतो पुतलीको विगविगी बढेसँगै भित्रिदै यस्ताे ख-तरनाक राेग (भिडियाे हेर्नुस्) । गण्डकी प्रदेशमा यतिबेला सेतो पुतलीले आ-तङक मच्चाइरहेको छ । प्रत्यक १ बर्ष विराएर आउने यो पुतलि बाट लाग्ने रोग को नाम हो सापु । सेतो पुतलीको झुसको कारण मानिसको आंखाको जो-तीनै गुम्ने गर्दछ । पोखराको हीमालयन आंखा अस्पतालमा सापुका विरामी आइरहेका छन् ।***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
एकै चोटी आंखा रातो हुदै जाने र केही घण्टामै आंखाको ज्योति गुमाउने भयानक रोगको बारेमा आजको कार्यमक्रम छ यो रोग बाट कसरी बच्न सकीन्छ हीमालयन आंखा अस्पतालका डा। इलीया श्रेष्ठ के भन्नुहुन्छ आजको कार्यक्रममा हेर्नुहोला भिडियो सहीत
याे पनि होनुहोस्ः, हार्दिक बधाई ,चर्चित अभिनेत्री तथा कमेडी च्याम्पियन कि जज ऋचा शर्मा आमा बनिन् ! अभिनेत्री ऋचा शर्मालाई पुत्र लाभ भएको छ । बुधवार बिहान थापाथलीस्ठित नर्भिक अस्पतालमा उनले छोरालाई जन्म दिएकी हुन् ।
ऋचा निर्णायक रहेको ‘कमेडी च्याम्पियन’ ले फेसबुक पेजमार्फत उनी आमा बनेको जानकारी गराएको हो । आमा र सन्तान दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको बताइएको छ । ऋचाका श्रीमान दिपेक्ष राणाले छोरालाई बोकेको एक तस्बिर बाहिरिएको छ । अस्पतालका अनुसार नर्मल तरिकाले बच्चा नजन्मेपछि शल्यक्रियापछि बच्चा जन्मिएको हो ।
बच्चाको तौल तीन किलो एक सय ग्राम छ । ऋचाको २०७६ मंसिर २१ गते दिपेक्ष राणासँग विवाह भएको थियो । विवाहअघि उनीहरु करीब दुई वर्ष प्रेममा थिए । यस वर्षको न्यू इयरमा ऋचाले सोसल मिडियामा श्रीमानसँग सजीवनको विरुवालाई पानी हालिरहेको एक तस्बिर पोस्ट गर्दै आफू आमा बन्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
डेलिभरी हुने समय नजिकिएपछि उनले हालै ‘कमेडी च्याम्पियन’ बाट विश्राम लिएकी थिइन् । हरेक प्रकारका चरित्रमा डुबेर अभिनय गर्न सिपालु मानिने ऋचाले फिल्म ‘फस्ट लभ’ बाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी थिइन् । उनको करिअरकै उत्कृष्ट फिल्मको रुपमा ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’ लाई लिने गरिन्छ ।